नारीको सक्कली रुप ः ‘शूर्पणखा’ खण्डकाव्य | चितवन पोष्ट दैनिक
नारीको सक्कली रुप ः ‘शूर्पणखा’ खण्डकाव्य
२०७१ फाल्गुन २३, शनिबार ०२:५४ गते
गोविन्दराज विनोदी सरल र सहज प्रवृत्तिका कवि हुन् । जतिसुकै गम्भीर र नीरस विषय भए पनि विनोदीको हातमा परेपछि उनको शब्द चयन र ओजिलो भाव प्रस्तुतिले गर्दा कविताले पाठकको मन छुन पुग्दछ । उनका छन्दोबद्ध कविता पढ्दै जाँदा लेखनाथ र माधव घिमिरेको कविता पढ्दाको जस्तो आनन्द आउँछ । नेपाली भाषा र साहित्यको उत्थानमा लागिपर्ने कवि विनोदी साहित्यका विभिन्न विधाहरुमा कलम चलाउँछन् । उनका ती सिर्जनाहरु आ–आफ्नै विशेषता बोकेर पाठकसामु उभिएका छन् ।
प्रस्तुत खण्डकाव्य ‘शूर्पणखा’ कविको एघारौँ कृति हो । यसमा तेह्रवटा सर्ग र दुई सय चौवन्न श्लोकहरु छन् । प्रत्येक सर्गको अन्त्यमा वियोगिनी छन्दले त्यस सर्गभित्रको सारवस्तुलाई समेटेको छ भने बाँकी मन्दाक्रान्ता छन्दमा लेखिएका सबै श्लोकहरुले काव्यको विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरेका छन् । त्रिवेणी साहित्य परिषद् नवलपरासीद्वारा प्रकाशित यस खण्डकाव्यको सुरूमा परिषद्कै अध्यक्ष डा. नारायणप्रसाद खनालको सारगर्भित प्रकाशकीय मन्तव्य छ । त्यसरी नै आख्यानकार निर्मोही व्यासले उत्कृष्ट काव्यकृतिका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको छ भने समालोचक डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतमले मिथकीय काव्यपरम्पराको जीवन्त काव्य ‘शूर्पणखा’को समीक्षात्मक भूमिका लेख्नुभएको छ । आत्मनिवेदनमा काव्यकार विनोदीले खण्डकाव्यको सान्दर्भिकता र काव्यनायिका शूर्पणाखाको प्रतिकूल चरित्रलाई समयसापेक्ष भएर हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । पौराणिक कथावस्तुलाई आधार मानेर लेखिएको भए पनि यस काव्यमा काव्यकारको उपयुक्त शब्द चयन र आकर्षण शैलीले गर्दा यथेष्ट मौलिकता झल्केको पाइन्छ ।
हरेक नेपाली पाठक रामायणको कथावस्तुसँग परिचित छन् । पूर्वीय दर्शनको धरोहर मानिने रामायण ऐतिहासिक काव्य हो, कल्पना होइन । त्यसबेलाको परिवेश, सामाजिक मर्यादा र मानवीय समवेदनाहरु यसमा वर्णित छन् । लंका नरेश रावणकी बहिनी शूर्पणखालाई रामायणको खलनायिकाका रुपमा उभ्याइएको छ । तर, कवि विनोदीले आफ्नो खण्डकाव्यमा शूर्पणाखालाई नायिकाका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । कथाको सम्पूर्ण विषयवस्तु उनकै सेरोफेरोमा घुमेको छ । कथा सार यस्तो छ ः शूर्पणाखा विवाहयोग्य उमेरमा प्रवेश गर्छिन् । उनमा जवानीको रंग चढेको छ । आफूमा भएको परिवर्तनप्रति उनी दंग छिन् । केटा साथीको चाहना बढेको छ, उनलाई । लामो–लामो नङ पालेकी काव्यनायिकालाई बाल्यकालको सुखसयल र आफ्नो बाबाआमाको ज्ञानविज्ञान योग र भोगको संवाद सम्झना आउँछ । लंकामा खेलेको, त्यहाँको वैभव, आफ्नै सुरले राति अबेरसम्म डुलेर घर फर्केको, रहरलाग्दा गहनाहरु पहिरिएर अरुभन्दा ठाँटबाँठले हिँडेको सबै उनी सम्झिन्छिन् । आफ्नै शरीरका अंगहरु विकसित भएर आफैँमा देखिएको परिवर्तनप्रति उनी दंग पर्छिन्, सर्माउँछिन् । राम्रा युवकहरु देख्दा लोभिन्छिन् ।
उमेर पुगेको छ, परिवारमा बिहेको कुरा चल्छ । हुनेवाला पतिको अनुहार हेर्न आतुर छिन्, उनी । विवाहमण्डपमा स्वयंवरको माला पहिराउँदा दुलाहाको स्पर्शलाई उनी जिन्दगीको साह्रै सुखद पल सम्झिएकी हुन्छिन् । तर अपशोच ! सुहागरात मनाउन नपाउँदै लडाइँको मैदानमा आफ्नै दाजु रावणको हातबाट उनको पतिको मृत्यु हुन्छ । शूर्पणखा विधवा हुन्छिन् ।
पतिको वियोगमा भौँतारिँदै शूर्पणखा देश दर्शनतिर लाग्छिन् । मनमा सन्तापको ज्वाला बोकेर दुःखी हुँदै दण्डकारण्य पुग्दा प्रकृतिको काख र साथ पाउँछिन् । उनमा केही धैर्य र शान्ति छाउँछ । त्यहाँ रहँदा र बस्दा उनलाई कसैले अवध नरेश दशरथका प्रतापी छोराहरुका बारेमा सुनाउँछन् । राम, लक्ष्मण र सीतासँग उनको पञ्चवाटिकामा भेट हुन्छ । उनका मनमा यौनिक तरंगहरु उम्लन्छन् । रामको समीपमा उनले पति वरण गर्ने इच्छा व्यक्त
गर्छिन् । पत्नीव्रता राम किन स्वीकार्थे तिनका कामातुर प्रस्ताव, उनले भाइ लक्ष्मणतिर पन्छाइदिन्छन् । रामभक्त लक्ष्मणले त्यस्ती प्रेमान्धीको प्रस्ताव स्वीकार्नु त परै जाओस् तिनलाई लुच्ची, अबुझ, दुर्मुखा, नीच, स्वार्थी भनेर निन्दा गर्दै नाक–कानै काटिदिने धम्की दिन्छन् । शूर्पणाखा लज्जित हुँदै आफू अपमानित भएको सम्झिन्छिन् । यसरी उसको जीवनमा गम्भीर चुनौती आउँछ । सीतालाई अपहरण गरी राम–लक्ष्मणसँग बदला लिने निष्कर्षमा पुगेर दाजु रावणसमक्ष प्रस्ताव राख्न पुग्छिन् । खण्डकाव्यको कथासार यत्तिमै टुंगिन्छ । कवि यस काव्यको अन्त्यतिर कथावस्तुलाई वियोगिनी छन्दमा यसरी प्रस्तुत गर्छन् ः
‘शूर्पणखा’ खण्डकाव्यको कलेवरलाई हेर्ने हो भने यो त्यति लामो र मोटो छैन । मैले दुई घन्टामा यसलाई पढेर सिध्याएको हुँ । कवि विनोदीको उच्च सोच र महनीय शैली अनि लोकप्रिय छन्दमा यो काव्य हिउँदको नारायणीझैँ उतारचढाव नभई एकनासले सलल बगेको छ । यहाँ वर्णन गरिएका प्रसंगहरु र दिइएका उपमाहरुले मानव हृदयमा झंकार उत्पन्न गराउँछन् । पञ्चवटीको प्राकृतिक परिदृश्य र ऋषि कुलीय पद्धतिलाई शब्दमा उतारेर प्राचीन समयको जीवन्त झलक प्रस्तुत गरेको प्रसंग पढ्दै जाँदा एक क्षण भए पनि त्यहीँ बसेर शान्ति लिएको जस्तो मनमा लाग्छ । कविले कैकसी (रावण र शूपर्णखाकी आमा) र विश्रवा (रावण तथा शूर्पणखाका पिता) लाई भौतिकवाद र अध्यात्मवादको प्रतीकका रुपबाट संवाद गराएका छन् ।
‘शूर्पणाखा’ खण्डकाव्यको विषयवस्तु, पात्रहरु, स्थान विशेष सबै–सबै नै पौराणिक काव्य रामायणसँग सम्बन्धित भएकाले यस्ता सुनेजानेका प्रचलित पुस्तक पढेर के नै नौला कुरा थाहा पाउनुछ र भन्ने पाठकको मनमा आशंका हुन सक्छ । तर, यसमा हामीले सुनेजानेका कुराभन्दा फरक मत र नारी मनोविश्लेषणको मौलिक आधारहरु सूक्ष्म रुपबाट केलाइएको छ । काव्यनायिका शूर्पणखालाई मूल रामायणमा चरित्रहीन नारीका रुपमा उभ्याइएको छ । तर, यस काव्यमा भने काव्यकारले उनको चरित्रलाई सहज नारी स्वभावको संज्ञा दिँदै यौवनावस्थामा पति गुमाएकी उनले कुनै पुरूषप्रति आकर्षित हुनु कुकर्म होइन भन्ने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । विधवा हुनु उनको दोष होइन, त्यसकै कारणबाट अपहेलित हुँदै जीवनभर एक्लिएर बस्नुपर्ने उनको के दोष ? एउटा घर भत्किनु, अर्को घर बनाउन खोज्नु, यो पनि त नराम्रो सोच होइन नि । कविले उपसंहारमा यिनै कुराहरुलाई अघि सारेर शूर्पणाखालाई न्याय दिलाउन खोजेका छन् ।
नारी सृष्टिकर्ता हुन् । नारीबिनाको घरपरिवार र जीवन नीरस हुन्छ । नारी–पुरूषबीच भेदभावरहित समाज सभ्य र सुखी हुन्छ । यस काव्यले नारीको हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । त्यसैले, प्रकाशकीय मन्तव्यमा डा. नारायणप्रसाद खनाल लेख्नुहुन्छ– शूर्पणाखाले त्रेताको रामयुगमा नाक, कान गुमाएपछि बल्न आज कलिको विनोदीयुगमा आएर पुनर्जीवन प्राप्त गरेकी छ । उसभित्र निक्षिप्त मानवअधिकारको सुषुप्त भाव जागृत भएको अनुभूति हुँदैछ ।
अन्त्यमा, मैले कवि विनोदीका प्रयास सबै रचनात्मक कृतिहरु पढेको छु । भिन्नभिन्न स्वाद पाउँछु, तिनमा । यस काव्यको स्वादचाहिँ कागतीको रसजस्तो छ, अमिलो नवरसमध्येको एक रस तर गुणकारी । रामायण पढ्दाको शूर्पणखा राक्षसकी बहिनी भएकाले क्रूर, दुर्मुखा, चरित्रहीनजस्ती लाग्दथ्यो । तर, यस खण्डकाव्य पढिसक्दा उसप्रति सहानुभूति जागेर आउँछ । राजकुलकी कन्या भएर पनि दुःख पाएकी, भाग्यले उसैलाई ठगेको, यौनावस्थाले पीडित, अपहेलित विधवा शूर्पणाखाप्रति काव्यकार सकारात्मक देखिन्छन् । शूर्पणखा नारी हो, उसलाई अन्यायमा पिल्साउन हुन्न भनेर नै कवि काव्यभित्र नारी महिमाको गुणानुवाद गर्छन् । नारीलाई स्वतन्त्रता दिने र तिनको अधिकारका बारेमा बहस भइरहेको वर्तमान युगमा प्रस्तुत खण्डकाव्य अत्यन्त सान्दर्भिक हुन आउँछ ।